List oo dhamaystiran fulinaya Recovery iPad Password - 3 Siyaabaha
* About iPad Password:
iPad ma wax weyn baa isku dhafan ee loo baahan yahay iyo raaxo. Dadku waxay inta badan iyaga ilaaliyo sirta. Laakiin goortii la illoobi doonin ama la lumiyo, ka dibna dhibaatada bilaaban. password iPad waa code ah kaas oo la abuuray by ay user isku warqad iyo tirada gol leeyahay in uu iPad hortageyno in si qaldan. Password ayaa asal ahaan heshay mid ka mid ah ayaa waraaqaha muhiimka ah iyo waxyaabo kale oo muhiim ah in la soo xaday wax ay shisheeyayaal ama dadka aan la rabin. Guuldarro ee password ee iPad waa dhibaato guud oo doqon ah in dadka isticmaala ay. Inta badan dadka inta badan sameeyo noocyada kala duwan ee qalad.
* Maxaa ku dhici doona haddii aad u Khasaaray Your Password iPad?
Haddii aad Mudanayaasha sirta ah ee aad iPad iyo illoobin password ka dibna qortaa erayga sirta qaldan jeer aad u tiro badan, qalab aad laftiisa ku meel gaar ah gab doonaa. Bandhigay ayaa ku tusi doona fariin Disable. Caadi ahaan, haddii qof isku dayo inuu soo galo password qaldan lix jeer oo isku xigta, nidaamka la soo baxay xiran doonaa oo wuxuu muujin doonaa fariin soo kabasho.
* Siduu u iPad Recovery Password - 3 Siyaabaha
Si aad u xaliyo dhibka guuldarro password iPad kor ku xusan, waxaad isku dayi kartaa mid ka mid ah kuwan soo socda 3 siyaabood si ay u qabtaan iPad kabashada password:
Qaybta 1. Isticmaalka Lugood
Qaybta 2. Isticmaalka Raadi My phone
Qaybta 3. Isticmaalka Recovery Mode
Haddii aad synced qalab aad la Lugood, aad u soo celin kartaa qalabka aad la leedahay Lugood Library
Connect iPad in kombiyuutarka aad si caadi ah u hagaagsan la.
Lugood Open. Guud ahaan, haddii aad isticmaali Lugood kombiyuutarka si aad u hagaagsan oo aad iPad, markaas waxaa jiri doona ma fariimaha, xusuusin ah "Trust". Haddii kale, Lugood ku weydiin doonaa inaad ku kalsoon tahay tan computer, oo ma aad samayn kartid tan aad iPad xiran yahay. Xaaladdan oo kale, isku day kale 2 siyaabaha hoos ku xusan.
itune si toos ah u hagaagsan doonaa qalab aad iyo abuuro gurmad ah. Haddii aan samayn, guji Up Back Hadda in la abuuro file ah oo gurmad gacanta.
Ka dib markaas, guji Soo Celinta iPhone aad u bilowdo hawsha loo soo celiyo. Ka dib markaas, waxaad arki kartaa in aad furto kartaa iPad oo aan wax shuruud password.
Haddii aad awood u heli my iPhone in iCloud, waxaad u isticmaali kartaa si aad u masixi iPad.
Tag icloud.com/#find iyo gasho la ID Apple si aad u ogaato haddii aad awood u hel My iPhone. Haddii aad karti Raadi My iPhone, ka dibna sii.
Riix Qalabka All sare ee suuqa kala browser aad.
Dooro qalab aad iyo guji "masixi (qalab)" si ay u masixi qalab iyo password.
Isticmaal Kaaliyaha Mudanayaasha qalabka si aad u soo celin gurmad ugu dambeeyey ee aad iPad.
iPad hab kabashada hab ah oo tirtiro qalab aad oo dib u soo celineysa iyo xal u arrinta. Haddii aad hore u synced la Lugood ama iCloud, waxaa laga yaabaa inaad si loo soo celiyo ka dib markii gurmad soo kabashada awoodaan. Halkan sida loo geliyey hab kabashada.
Dami qalabka aad. Haddii aadan riixi kartaa oo qaban hurdada / inay badhamada guriga dib muddo xoogaa ilbiriqsiyo ah u dami.
Bareesada ka iPad ee USB cable galay computer oo keliya.
Ku hay hoos aad button iPad Home sidii aad cable USB ku xirmaan, waxa uu.
Marka aad aragto shaashadda Connect in Lugood, sii daayo button guriga. Haddii aadan arki isku dayi tallaabadii 1 ilaa 3 hal mar. itune waa in la furo iyo muujiyaan fariin.
Riix Soo Celinta iPad si ay u soo celiyaan.
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Xiriirada on iPad
Sida loo soo ceshano tirtiray Notes ka iPad
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga mini iPad
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka iPad
iPad ku xayiran on Apple Logo Screen
Sidee uga baxdo iPad Recovery Mode
Sida loo iibi Old iPhone
> Resource > iPad > Top 3 Siyaabaha Qabtaan iPad Recovery Password